Parent Dashboard - अभिभावकहरुको ड्यासबोर्ड - अभिभावकहरुको लागि सर्वेक्षण (Nepali) Survey
Parent Dashboard - अभिभावकहरुको ड्यासबोर्ड - अभिभावकहरुको लागि सर्वेक्षण (Nepali)
पारदर्शिता बृद्धि गर्न तथा अभिभावक र सर्वसाधारणलाई विद्यालयको कार्यसम्पादनको बारेमा जानकारी गराउन र अभिभावकहरु र सर्वसाधारणहरुमा अन्य विद्यालय स्तरीय तथ्यांकसम्मको पहुँचलाई सहज बनाउन न्यू योर्क राज्यको शिक्षा विभाग (एन.वाइ.एस.इ.डी.) ले अभिभावकहरुको एउटा ड्यासबोर्डको विकास गरिरहेको छ । सो ड्यासबोर्ड न्यू योर्कको इ.एस.एस.ए. योजनाको अंश हो ।
अभिभावकहरुको ड्यासबोर्डको विकासको कामलाई मार्गदर्शन गर्न एन.वाइ.एस.इ.डी.ले अभिभावकहरु र सरोकारवालाहरूबाट प्रतिक्रिया संकलन गरिरहेको छ ।अभिभावकहरु र सर्वसाधारणका लागि सबैभन्दा उपयोगी हुने तथ्यांकको पहिचान गर्न एन.वाइ.एस.इ.डी.ले यी प्रतिक्रियाहरुलाई प्रयोग गर्ने छ।
कृपया यो पाँच मिनेटको सर्वेक्षण पुरा गर्नुहोस् र यस अभिभावकहरुको ड्यासबोर्डलाई हामीले कसरी सक्दो उपयोगी बनाउन सकिन्छ भनी भन्नुहोस् ।
* 1. तपाईंलाई वर्णन गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका कुन हो? लागु हुने सबैमा चिन्ह लगाउनुहोस् ।
अभिभावक वा संरक्षक
* 2. अहिले न्यू योर्क राज्यमा तपाईंको स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयको बारेमा तपाईले कहाँबाट जानकारी लिनुहुन्छ (जस्तैः स्नातकोत्तर दरहरू, विद्यार्थीको कार्यसम्पादनको तथ्यांक, इत्यादि)? लागु हुने सबै छान्नुहोस् ।
विद्यालयको पत्रहरू (यु.एस. पोस्टल सर्भिस मार्फत वा विद्यार्थी मार्फत घरमा पठाइएको पत्र)
जिल्लाले पठाएको पत्रहरू (युएस पोस्टल सर्भिसमार्फत वा विद्यार्थीमार्फत घरमा पठाइएको)
न्यू योर्क राज्यको शिक्षा विभाग
सामाजिक सञ्जाल (जस्तैः फेसबुक, ट्वीटर, इत्यादि)
वकालत गर्ने र गैरसरकारी संस्थाहरू
मेरो स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयको बारेमा मैले जानकारी पाउँदिन ।
* 3. तपाईंलाई न्यूयोर्कमा भएका सार्वजनिक विद्यालयहरुको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न के ले रोक्छ? लागु हुने सबैमा चिन्ह लगाउनुहोस् ।
कहाँ जानकारी पाउने भनी मलाई थाहा छैन ।
जानकारी लिन मसँग समय छैन ।
उपलब्ध जानकारी अलमलाउने खालको छ र उपयोगी छैन ।
म विद्यालयहरू बारे जानकारी चाहन्न ।
मसँग मलाई चाहिने सबै जानकारी छ ।
* 4. अहिलेको न्यू योर्क विद्यालय रिपोर्ट कार्डको वेवसाइटको बारेमा तलका मध्ये तपाईंको लागि कुन सत्य हो? लागु हुने सबैमा चिन्ह लगाउनुहोस् ।
मलाई यो स्रोत छ भन्ने बारेमा थाहा थिएन ।
यो वेबसाइट कहाँ पत्ता लगाउने भनी मलाई थाहा छैन ।
मेरो स्थानीय विद्यालयको बारेमा जानकारी लिन मैले अन्य स्रोतहरूको प्रयोग गर्छु ।
मलाई यस्तो खालको स्रोतमा कुनै रूचि छैन ।
* 5. विद्यालयको गुणस्तर निर्धारण गर्न तपाईलाई मद्दत गर्ने कस्तो किसिमको तथ्यांक सबैभन्दा उपयोगी हुन्छ?
हरेक किसिमको तथ्यांकको विवरण उपलब्ध छ .
कृपया उपयोगिता अनुसार क्रमबद्ध तरिकाले मिलाउनुहोस् (1 = सबैभन्दा उपयोगी):
निःशुल्क र मूल्य घटाइएको दिउँसोको खाना
अंग्रेजी भाषामा दक्षता
कलेज, करियर र नागरिक तयारी
लामो तथा निरन्तर अनुपस्थिति
इ.एस.एस.ए. जवाफदेहिता पदहरू
* 6. विद्यालयको तथ्यांक हेर्दा, सबैभन्दा उपयोगी सन्दर्भ उपलब्ध गराउन के ले सघाउँछ?
जिल्लासँग विद्यालयको तुलना
राज्यसँग विद्यालयको तुलना
आफ्नै अघिल्लो वर्षको नतीजासँग विद्यालयको तुलना
विद्यालय भित्रकै विद्यार्थीहरूको उपसमूह बीचको तुलना (जस्तैः जातीयता, अंग्रेजी भाषा सिकाइहरू, इत्यादि) ।
* 7. तपाईंले सामान्यतयाः तपाईंको स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयको बारेमा जानकारी र रिपोर्टिंग तथ्यांकको लागि कति समय वेवसाइटमा विताउनुहुन्छ?
५ मिनेटभन्दा कम
२० मिनेट भन्दा धेरै
* 8. विद्यालयको तथ्यांक प्रदान गर्ने नयाँ वेवसाइट कसरी प्रयोग गर्ने भनी वर्णन गर्ने भिडियो हेर्नका लागि तपाईंले कति समय खर्च गर्न चाहनुहुन्छ?
म वेवसाइट कसरी हेर्ने भन्ने ट्युटोरियल हेर्न समय खर्च गर्दिन ।
एक मिनेट वा कम
५ मिनेटभन्दा धेरै
सर्वेक्षण पुरा गर्नुभएकोमा धन्यवाद ।
यदि तपाईंसंगको कुनै प्रश्नहरु वा टिप्पणीहरु छन् भने, कृपया ParentDashboard@nysed.gov इ-मेल गर्नुहोला ।